Famolavolana tsindrona plastika miaraka amin'ny milina fanamainana induction
Famolavolana tsindrona plastika miaraka amin'ny induction heating mitaky alohan'ny fanafanana ny lasitra amin'ny hafanana avo kokoa, hahazoana antoka ny fikorianana na fanasitranana ny akora vita amin'ny tsindrona. Ny fomba fanafanana mahazatra ampiasaina amin'ny indostria dia ny fanafanana etona na fanoherana, saingy misavoritaka izy ireo, tsy mahomby ary tsy azo atokisana. Ny fanamafisana induction dia safidy madio, haingana ary mahomby amin'ny angovo izay efa be mpampiasa tato anatin'ny taona vitsivitsy hanoloana ny etona, gazy na fanafanana ny lasitra ary maty.
Inona no atao hoe tsindrona tsindrona?
Ny famolahana tsindrona plastika miaraka amin'ny fanafanana fampidirana dia ny dingan'ny plastika plastika (polymers thermosetlika / polymers thermoplastic) izay azo ovaina indray mandeha monja, dia atsindrona amin'ny tsindry mankany amin'ny lavaka bobongolo, izay mameno sy manamafy mba hamokarana ny vokatra farany.
Ahoana ny fomba fiasan'ny tsindrona plastika?
Ny fizotry ny famolavolana plastika ao Protolabs dia dingana mahazatra misy amina lasitra alimo. Ny famindrana aliminioma dia mahomby kokoa noho ny vy, ka tsy mila fantsom-panafana - izany hoe ny fotoana itehirizantsika amin'ny fampangatsiahana dia azo ampiharina amin'ny fanaraha-maso ny tsindry feno, ny fanahiana amin'ny tarehy ary ny famokarana ampahany tsara.
Ny péleta résin dia alefa ao anaty barika izay ahalefaka, hasiana ary hampidirina ao anaty rafitry ny mpihazakazaka. Ny resina mafana dia voatifitra ao amin'ny lavaky ny bobongolo amin'ny vavahady ary ny ampahany dia novolavolaina. Ny tsimatra ejector dia manamora ny fanesorana ny ampahany amin'ny lasitra izay latsaka ao anaty fitoeram-pako. Rehefa vita ny fihazakazahana dia apetaka ny boaty (na ny santionany voalohany) ary halefa tsy ela taorian'izay.
Ahoana ny fampiasana ny heating induction amin'ny indostrian'ny maty sy ny bobongolo?
Fampidirana fanodinana fitaovana sy bobongolo amin'ny famolahana tsindrona plastika
Fanafanana ny fitaovana famolahana ho an'ny fanasitranana ny vokatra vita amin'ny fingotra sy ny kodiaran'ny fiara
Fanamafisana induction ho an'ny famokarana katetika sy famokarana vokatra fitsaboana
Fanamafisana ny famonoana sy ny lovia ho an'ny nohitsakitsahana sy fananganana vy
Induction Preheating ny lasitra fanariana amin'ny indostrian'ny fanariana vy
Fampidirana hafanana fitsaboana ary fanamafisana ny fanisiana tombo-kase sy fanapoahana fitaovana ary maty
Sokajy Induction Heating PDF, Technologies Tags Koron-tsindrona plastika IH, famolavolana fanindronana fanamafisana induction, fampidirana tsindrona fampidirana, fanamafisam-peo fanamafisam-peo fampidirana, fampidiran-tsindrona plastika fampidirana, Fanamboarana tsindrona, Famolahan-tsindrona plastika, Famolavolana tsindrona plastika, Fanamafisana tsindrona plastika, Milina tsindrona plastika, Rafitra fanoratana tsindrona plastika, Inona no atao hoe tsindrona tsindrona Post Fikarohana
Akoroka bala vita amin'ny varahina
Fametahana Steam Steam
Generaor Steam induction